Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Oktoberfest kasị ukwuu n'ụwa: ụgbọ elu Lufthansa na-egosipụta ndị ọrụ 'Trachten' kachasị ukwuu n'oge niile
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Naanị oge maka Oktoberfest na Munich, LufthansaNdị ọrụ ụgbọ ala na-akwado maka ịpụ. N'afọ a, ndị ọrụ ụgbọ mmiri kachasị na ụwa ga-ebuputa ọkọlọtọ Lufthansa Airbus A380 ke akpa ini. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ụgbọ elu Lufthansa 21 ga-ere uwe ha maka uwe ọdịnala Bavaria. Flightgbọ elu Lufthansa 'Trachten' nke mbụ ga-esi Munich pụọ na 23 Septemba wee gawa Beijing mgbe ụgbọ elu na 3 October ga-esi Munich gaa Los Angeles. Na mgbakwunye na nke a, ndị ọrụ ọrụ na nhọrọ nke ụzọ gasị Europe ga-apụkwa n'uwe ọdịnala.
Ndị ọrụ Lufthansa na uwe ọdịnala Bavaria
Uwe ọdịnala nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri Lufthansa na-eyi ogologo oge bụ ndị Angermaier, bụ ọkachamara ọkachamara na Munich maka uwe Bavaria mara mma. Dirdị ụmụ nwanyị na-agba ụgbọ elu na-acha anụnụ anụnụ nke nwere ọla ọcha na-acha odo odo, ebe ụmụ nwoke ga-eyi obere lederhosen na uwe ojii na-acha anụnụ anụnụ nke otu ihe ahụ. Dị ka ọ dị n'afọ ndị gara aga, ndị njem Lufthansa nwekwara ike ịnwe ụgbọ elu 'Trachten' na nhọrọ nke ụzọ ndị Europe si Munich. Na Septemba na Ọktọba, ndị ọrụ ụgbọ mmiri Lufthansa CityLine ga-agbanwe uwe ha maka dirndls. Ebe ụgbọ elu ha bụ Amsterdam, Lyon, Gdansk, Milan, Sofia, Brussels, Ancona, Belgrade, Warsaw, Cologne na Münster.
Maka ndị na-akwado ndị njem njem Lufthansa na Terminal 2 nke Munich, ọ bụ ọdịnala kemgbe ọtụtụ afọ ịnabata ndị njem na ejiji ọdịnala n'oge Oktoberfest. Na mgbakwunye na uwe ndị Lufthansa, ụmụ nwanyị nwekwara ike iyi dirndls na ụmụ nwanyị nwere ike iyi uwe ọdịnala Trachten.
Oktoberfest na ebe ezumike Lufthansa
A na-akwadebe ebe ezumike Lufthansa nke Munich maka Oktoberfest. N'ime okpukpu iri na abụọ na Terminal 2 na ụlọ satịlaịtị, a ga-arụ ọrụ karịa kilogram 4,000 nke Leberkäs, yana ihe karịrị 38,000 pretzels na ihe dịka kilogram 750 nke sausaji Weißwurst. Nke a afọ Oktoberfest menu na festively mma Lufthansa First Class lounges ga-amalite na Festtagssuppe, a ọdịnala ofe, sochiri ndị ọrụ ugbo na ọbọgwụ na mmechi na arụrụ n'ụlọ apple strudel jere ozi na Them ihendori, asara n'ọkụ almọnd na rọm-tinye mịrị. Na Senator na Business lounges, ndị njem ga-ahụkarị ahụkarị Bavarian efere dị ka Leberkäs ', Fleischpflanzerl meatballs na quark igwe nrụaka na piom topping.